लकडाउनको विहे, दाइजोमा स्यानिटाइजर र मास्क::Nepali News Portal from Nepal
वैशाखमा थोरै थिए लगन !
पोखरा, २६ बैशाख– विवाह मण्डप उस्तै, बाजा नबजेर के भो त ? मन्त्रोच्चारण र होमादी कर्म पनि उही ! पण्डित कृष्णप्रसाद लामिछाने धर्मलाई व्यवहारिक बनाउन माहिर रहेछन् । उनी मन्त्रोच्चारणकै बीच सााजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरिरहेका थिए । फरक थियो त, एउटै कुरा,भेला भएका आफन्ती र जन्तीहरुको मुहारमा मास्क थियो, पार्टी प्यालेसको गेटमै स्यानिटाइजरको व्यवस्था । सीमित जन्तीका माझ बेहुलीका पिता नेत्रपाणि बास्तोला भन्दै थिए,‘ उहाँहरु छोरी माग्न आउनुभयो, मैले नानी र पानी मात्रै दिन्छु भनेँ,उहाँहरु राजीखुसी हुनुभयो,म भागवत्का कार्यक्रममा हिँड्ने मान्छे, कर्म उही तर फरक शैलीले छोरी अन्माउने निधो गरेँ ।’
हो, नेत्रपाणि र उनकी धर्मपत्नी अमृता बास्तोलाले बिहीबार छोरी अनुषालाई अन्माए । भनौं, हिन्दु संस्कार अनुसार छोरीको जात र गोत्र नै फेरिदिए । छोरी अनुषाले हाँसीखुसी पोखरा–३०,खुँदी बस्ने दीपक र विन्दु भट्टराईका सुपुत्र डिविन भट्टराईसँग सँगै जिउने र सँगै मर्ने कसम खाइन् ।
खासमा उनीहरुको विहे वैशाखको ५ गते नै जुराइएको थियो । तर, कोरोना संक्रमणसँगैको लकडाउनले विहे पर स¥यो । बेहुला–बेहुली दुबै परिवारले कुरे पनि । तर, लकडाउन बढेसँगै उनीहरुले ‘कर्म उही तर फरक शैली’ले लगनगाँठो कस्ने निर्णय गरे । आफ्ना एकाघरका मान्छेको उपस्थितिमा विहे गर्ने कुरा मिल्यो । प्रशासनबाट स्वीकृति लिए र थोरै जन्तीको उपस्थितिमा विहे सम्पन्न गरे । आजकल विहे भड्किलो हुन्छ । अझ,सामाजिक पहिचान बनाएका नेत्रपाणिजस्ताले वरपरका सबैलाई बोलाउने बाध्यता नै बन्छ । तर, उनले त्यसो गरेनन् । बेहुला पनि राजी भए । उनले विहेसँगै दाइजोस्वरुप सम्धीलाई ५ थान मास्क र एउटा स्यानिटाइजर टक्र्याए । सम्धी र सम्धिनीलाई मास्क पनि लगाइदिए । यतिसम्मलाई औपचारिकता नै मानियो । तर, नेत्रपाणिले वैवाहिक कार्यक्रममै आफ्नो ठूलो मनको परिचय दिए । वाचाल नेत्रपाणिले ज्वाइँ र परिवारलाई पनि मख्ख पारे ।
‘मेरा सम्धी र ज्वाइँराजाले मलाई तपाईँकी सुशील कन्या मात्रै चाहिएको हो, सम्पत्ति मैसँग छ भन्नुभयो’, उनले भने,‘ उहाँहरुले त्यसो भनेपछि मैले विहेमा खर्च हुने रकम सामाजिक काममा लगाउने निर्णय गरेँ र करिब ५ लाख बराबरको रकम म विभिन्न सामाजिक संस्थालाई दिँदैछु ।’
उनले विहेकै कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई ५५,५५ रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । कोरोना त्रासका बीच समाचार संकलनमा खटिएका संचारकर्मीको सुरक्षामा प्रयोग हुनेगरि सो रकम दिइएको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सो रकमको सदुपयोग हुने विश्वास दिलाए । नेत्रपाणिले आफूले कखरा सिकेको पुरञ्चौरको भारती भवन माविदेखि लेखनथा पत्रकार मञ्च र अन्य सामाजिक संघ/संस्थालाई पनि अनुकुल समयमा रकम सहयोग गर्ने जानकारी गराए । सबै धार्मिक कर्म गरेर पनि सामान्य खर्चमा विहे गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि समेत आफूले यो काम गरेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल ज्योतिष परिषदका अनुसार २०७७ सालको वैशाखमा ७ वटा मात्रै लगन रहेका थिए । अन्तिम लगन विहीबार अर्थात् वैशाख २५ गते नै हो । लगन नभए पनि लगन निकाल्ने चलन छ । जेठमा जम्मा ४ वटा,असारमा ३ वटा र मंसिरमा ४ वटा मात्रै लगन छन् । त्यसपछिका महिनामा विहेका लगन राखिएको छैन ।